ZG Normalization,Syllable Breaking (Ver 2009) - MYSTERY ZILLION
ZG Normalization,Syllable Breaking (Ver 2009)
August 2009 edited August 2009 in PHP
အခြား သူတွေလည်း လေ့လာနိုင်အောင်ပါ။ Regular Expression တွေပဲ လှိမ့်ပြီးတော့ သုံးထားတာ လိုအပ်တာလေးတွေလည်း အကြံဉာဏ်ပေးပါအုံး... ဒါလေးဟာ zawgyi searching အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ornagai မှာ အသုံးပြုထားတယ်။ 2008 ကို 2009 ပြောင်းပေးတယ်။ normalization လုပ်ပေးတယ်။ syllable break လုပ်ချင်ရင်လည်း ရတယ်။
ဒါလေးကို အခြေခံပြီး wordpress blog တွေအတွက် 2009 converter ထပ်ရေးလို့ရတယ်။ ကျွန်တော် ရေးပြီးရင် တင်လိုက်ပါမယ်။
Bro, for Ornagai database, how did you store words in database? Normalise first and stored or stored first then normalise?
And can you explain the process if you choose second one, for example, how to normalise stored databases? One more question, any normalisation (do you need it?) for unicode?
normalize first and store.
Syllable break seems having some problems in character stacks.
@Lionslayer , I will change Ornagai to unicode, soon.
Gr8!! Thumbs up..